महिलामा हुने बाझोपनको उपचार गर्नुहोस् यसरी
अगस्ट 11, 2019 अगस्ट 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment डा. राम बहादुर बोहरा, बाझोपन
बाझोपनको उपचार गर्नुहोस् यसरी ! हरेक महिला विवाह भइसकेपछि सन्तानको रहर जाग्नु स्वभाविक हो तर विवाह भएको एक बर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म पनि गर्भ नरहेमा महिलालाई झस्काउने गर्छ किनभने हरेक महिला प्रसव पीडाको अनुभव लिन चाहन्छन् । सन्तान सुखको अपेक्षा राख्छन् ।
आफ्नै कोखबाट जन्मिएको बच्चालाई काखमा खेलाउने आकंक्षा हरेक महिलामा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जब आफु सन्तान जन्माउन असक्षम छु भन्ने वोध हुन्छ, त्यो कुरा कुनैपनि महिलाले सहजै पचाउन सक्दैन । तर, पचाउनैपर्ने वाध्यता आइलाग्छ कहिलेकाहीँ किनभने कति महिलामा बाँझोपनको समस्या हुन्छ ।
कुनै महिलाको महिनावारी हुने समयको अन्तराल २५ देखि ३० दिन भन्दा धेरै छ भने त्यसले उक्त महिलामा ओभ्यूलेसन नियमित नभएको जनाउ दिन्छ । एक अध्ययनका अनुसार मासिक धर्म चक्र २५ दिन भन्दा कम रहने महिलामा २७ देखि २९ दिनसम्म उक्त चक्र रहनेको तुलनामा गर्भ बस्ने सम्भावना कम हुने गर्छ ।
आज हामीले जस्ले उपचार गर्दा गर्दै थाक्नु भएको छ भने यो फर्मुला बनाएर खानुस ईश्वरको कृपाले यो समस्या हल हुनेछ । यो अनुभूत योग पाठकको लागि यहाँ पस्कन गइरहेको छु । बनाउन अलि गारो भएपनि यो औषधि धेरै पटक परिक्षण गरि सकिएको छ ।
प्रथम शुक्ल पक्षको शनिबार प्रात उठ्नासाथ नुहाएर सेतो धतुराको पात ल्याउनुहोस् र त्यसैदिन एउटै रंगको गाई जसको बच्चा बाच्छो होस् उसको दुध सवै ल्याउनुहोस् र दहि जाउनुहोस् । दहि जमाई सकेपछि त्यसलाई मथ्नुहोस् र घिउ निकाल्नुहोस् जति घिउको तौल छ त्यतिनै सेतो धतुराको पात घिउमा राख्नु होस् र तीन दिनसम्म राम्रोसंग घोटि सकेपछि चनाको दाना जत्रो गोली बनाउनुहोस् । महिनावारी भएको चार दिनदेखि ७ दिनसम्म यो औषधि बिहानै खान दिनुहोस् मनकामना पुरा गर्नेछ ।
नोट : युगौं युगदेखि यो औषधि प्रयोगमा आएको छ । बाझोपनका थुप्रै कारण हुन सक्छ । यदि यस्ता औषधि दिएर पनि समस्या समाधान नभएमा वैद्य, डाक्टरको परामर्श लिएर उपचार गर्न सक्नु हुनेछ ।
← धर्मशास्त्र अनुसार यी हुन् सुत्नै नहुने समय, जानी राखौ
भिडभाड मन नपरी एक्लै बस्न रुचाउने ४ राशिहरु →
One thought on “बाझोपनको उपचार गर्नुहोस् यसरी”
Pingback:यस्ता छन् महिलामा हुने बाझोपनको कारणहरु, जानी राखौ